Wasiiro iyo Saraakiil ka tirsan DFS oo lagu weeraray duleedka degmada Marko
Marko:-Wafdi iskugu jira wasiiro iyo saraakiil ka tirsan DFS ayaa maanta si dirqi ugu badbaaday weerar dhabagal ah oo ay ku qaadeen ciidamo ka tirsan Ururka Al-shabaab duleedka Degmada Marka ee gobalka Shabeelaha Hoose.
Wafdiga saaka la weeraray ayaa waxaa ka mid ahaa wasiirka arrimaha gudaha DFS C/kariin Xuseen Guuleed ,Wasiirka G/dhiga DFS,iyo taliyaha ciidanka Booliska Gen Shariif Sheekhuna Maye kuwaas oo xalay u hoyday Degmada Marka kuna sii jeeday saaka magaalada Muqdisho.
Wararka ayaa sheegaya in mid ka mid ah gawaaridii galbineysay wafdiga DFS ay miino la kacday taas oo sababtay khasaaro leh dhimasho iyo dhaawac waxaana xigay dagaal foolka fool ah.
Gudoomiyaha Gobolka Shabeellaha Hoose ee DFS C/Qaadir Maxamed Nuur Siidii, ayaa goordhow waxaa uu la hadlay warbaahinta isaga oo xaqiijiyey in wafdiga DFS la weeraray ayna jiraan khasaaro kala duwan oo soo gaaray ciidanka DFS iyo ciidamada Al-Shabaab ee weerarka soo qaaday.
Waa markii labaad isbuucaan gudihiisa oo masuuliin ka tirsan DFS ay si dirqi ah uga badbaadaan weerar ay soo qaadeen ciidamo ka tirsan Ururka Al-Shabaab.